China sy ny mpanamboatra tombo-kase voaisy tombo-kase eran-tany China Byland
Tin Box sokajin'i Shape
Vata vita amin'ny vinaingitra boribory
Boaty volo tsy ara-dalàna
Tora-kazo mahitsizoro sy mahitsizoro
Tin azo sokajiana amin'ny fampiasana
Fisotroana zava-pisotro misy divay sy divay
Biskoitra sy vatomamy vatomamy
Vata fandrahoana sakafo vita anaty vata
Tine menaka azo hanina
Tine sy kafe
Voina vidina ant-destoryer
Vata amin'ny fiara
Voina motera sy menaka fanosotra
Nahoana no fonosana tin
Maninona Byland Can
30g 50g 100g 250g 500g banga vita amin'ny caviar 8oz tsy misy ...
15g-30g-50g-125g-250g vata-kazo caviar vata vita amin'ny savony ...
Vata vita amin'ny Tin ary efajoro mahitsizoro ho an'ny fonosana fanomezana
Voahangy voasintona peratra ho an'ny sakafo fonosana sy ho an'ny ...
Tehina voaisy tombo-kase sy kapoaka vita amin'ny kafe voaisy tombo-kase
Custom Steel Coin Bank - Mpanamboatra China ny Metal ...
Boaty fanitso docrative namboarina manokana_ fanamboarana China ...
Sakafo am-bifotsy Can Can (3-piece) -Na dia afaka malalaka
Vata vita amin'ny vy vita amin'ny litera 5am-piterahana menaka oliva
4Liters (1gallon) tin ho an'ny fonosana menaka_lu ...
Telo vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy 3 ...
Sakafo vita amin'ny vy-tin-by-vy
1L-2L-1Gallon-5L F-style Tin vita amin'ny fonosana Chemi ...
1gallon-2gallon-3.5 galon Popcorn Tin Boxes_Pails
Byland Afaka mamokatra ny endrik'ireo banky farantsa vy. Ny banky vola madinika dia azo angonina be ary mandravaka trano maro. Manampy fahafinaretana sy fahalianana amin'ny birao, trano fisotroana ary garazy izy ireo. Ny banky scion metaly dia ampiasaina ho toy ny fanomezana, teny hendry ary dokambarotra Retro. Nandritra ny fihenan'ny resa, ny banky vola madinika dia mbola nivarotra matanjaka. Izy ireo dia fanomezana nostalgika, vaovao na azo angonina nefa tsy misy sarany lafo. Ny vokatray dia manana kalitao avo lenta ary ny fanontana avo lenta dia manome kalitao akaiky ny sary.
Ny dite Hermetic sy ny kapoaka kafe dia tsy manam-paharoa amin'ny fitoniana amin'ny talantalana noho ny tombo-kase hermetika izay miaro ny dite sy kafe amin'ny rivotra, hazavana, hamandoana ary ireo loto ivelany. Manana safidy farany vitsivitsy misy izahay, anisan'izany ny EZO Ends, Peel Off Ends, Peel Off with Valve Ends, ary ny haingon-trano fandrakofana metaly. Ny fonony mipoitra dia azo atao pirinty sy vita amin'ny paosin-tsoratra.
Fonosana kafe sy dite azo haverina 100%
Fantatray ny filanao fonosana kafe voafehy tsara sy feno rivotra izay tsy manome fialan-tsiny raha resaka faharetana. Tombony lehibe iray ny famonosana vy tsy azo refesina mandrakizay. Miavaka ny vy satria azo averina miverimberina hatrany tsy misy fahasimban'ny kalitao. Izy io dia mirakitra toekarena boribory satria manomboka amin'ny fanaovana vy ka hatrany amin'ny famokarana ka hatrany amin'ny mpanjifa hatrany amin'ny fanodinana aorian'ny mpanjifa.
Raha vantany vao averina amboarina ny can, dia mety ho lasa zavatra maromaro izy io: ampahany amin'ny tetezana, andry tohana, bisikileta, vatokely fitsangatsanganana, kianja filalaovana, fividianana kafe hafa, sns. fanariam-pako amin'ny alàlan'ny andriamby ary avy eo namboarina araka ny tokony ho izy. Noho ireo antony ireo, ny tahan'ny vy fanodinana vy manerantany dia manodidina ny 70-90% isan-taona. Io no fitaovana fanodinam-bokatra # 1 betsaka indrindra- mihoatra ny aliminioma, vera, taratasy ary plastika natambatra!
Ny vy mahery dia nitarika fihenan'ny lanja 25 hatramin'ny 40% tao anatin'ny telopolo taona lasa, miaraka amin'ny fihenan'ny emissions sy ny fampiasana angovo. Hatramin'ny 1900, ny indostrian'ny vy manerantany dia nanamboatra vy 24 tapitrisa tapitrisa taonina mahery. Io dia nampihena ny fanjifana vy amin'ny manodidina ny 30 miliara taonina ary koa ny fanapahana arina an-taonina hatramin'ny 15 miliara taonina. Ny indostria koa dia nampihena be ny fampiasana angovo. Ny famokarana vy iray taonina ankehitriny dia mitaky 40% fotsiny amin'ny angovo vitany tamin'ny 1960.
Noho ny hatsaran-tarehiny sy ny faharetan'izy ireo, angonina amin'ny vina, naverina alamina, na aseho amin'ny trano sy orinasa. Ny kapoaka kafe dia afaka mitahiry kafe na tsaramaso na afaka miova ho mpamboly, mpihazona pensilihazo, fitoeran-divay, sns.
Ny canes dia azo averina mivaingana 100% tsy misy fatiantoka kalitao. Tsy tokony hiafara amin'ny fanariam-pako mihitsy izy ireo.
Previous: Custom Steel Coin Bank - boaty mpanamboatra vola vita amin'ny metaly China
Manaraka: Metal Tin Cans-Container ho an'ny fonosana Wax Car sy Poloney
30g 50g 100g 250g 500g tsy misy poza kaody caviar 8oz ...
Boaty tinplate vy ho an'ny fonosana cookies-Biscu ...
Custom pirinty Krismasy firavaka Tin Box F ...
Voahangy voasintona peratra ho an'ny sakafo fonosana ...
Adiresy: No.14, Longcheng Mid-road, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, Sina
Ahoana ny fomba fanadiovana sy fitazonana ilay boaty vita amin'ny dite ...
Ny andraikitry ny fonosana vy
Tombontsoa amin'ny fampiasana fonosana boaty tin
Vokatra mafana / Sitemap